Link | Danya Wadi
By danyawadi January 8, 2020 Leaveacomment
Classification by Ethnic Group (best-known group name in bold) A Abá (Mbya Guarani), Abá (Guarani), Abaknon, Abira, Abor, Abor-Miri, Acahuayo, Acawoio, Accawa, Acehnais, Acehnese, Acehno, Acewaio, Achagua, Ache, Achehnese, Achenese, Achinese, Achual (Ecuador), Achual (Peru), Achuar, Adgawanon (Banwaon), Adgawanon (Higaonon), Adi Padam, Afghan, Afghan Uzbek, Afridi, Agua, Aguajun, Aguaruna, Agusan, Agusan del Sur, Ahirs, Ahuajun, […]
By danyawadi December 24, 2019 Leaveacomment
မေလဝန်း – စာကြည့်တိုက် စာအုပ်​​ပေါင်း ၆၀၀ ​ကျော်​ပါပဲခင်​ဗျာ… Aung San Suu kyi Comic The Fightining Peacok by AKAZU MIZUHA and MIMIC.pdf https://yadi.sk/i/73zaYVOexqukf ကံမြင့်မော် _သောနုတ္ထိုရ်က ငိုသတဲ့လားနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ.pdf https://yadi.sk/i/wSeBDHRjuDLZp ကို (တက္ကသိုလ်)- တာရာသိင်္ဂီ.pdf https://yadi.sk/i/WHr5GlgjuDLY7 ကိုကိုလေး-ခွင့်လွှတ်ပါ တင်နော်ဟေကာ.pdf https://yadi.sk/i/4jyn7g2_uDLYE ကိုဂျေ – ရဲရဲတောက် မြန်မာ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ.pdf https://yadi.sk/i/_LGDDD9fxLTej ကိုယ်​ကာယအလှ.pdf https://yadi.sk/i/L16NMllpuDLYG က​လောင်​စုံ- လက်တစ်ကမ်းမှ ရွှေနည်းလမ်းများ(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးဆောင်းပါးများ).pdf https://yadi.sk/i/3GqE9BO6uDLYM ခင်ခင်ထူး – ၀တ်လဲတော်ရွှေပုဆိုးတန်းထိုးလို့ကြိုမယ်.pdf https://yadi.sk/i/Tr9NakYExqqBv ခင်ခင်ထူး – ခမည်းကြိုး.pdf https://yadi.sk/i/uTqa47WsxqqC5 ခင်ခင်ထူး – ပန်းစည်းကြိုး […]
ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ်များ ဆိုင်ရာ Link
By danyawadi December 23, 2019 Leaveacomment
#မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအလွယ်တကူဖတ်ရှု့နိုင်သောဥပဒေဆော့ဝဲလေးတွေPdfလေးတွေထားချင်သူများအတွက်———- ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ်များ ============= ၁၉၄၇-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ .pdf https://yadi.sk/i/tSwInQXNfrdRY ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း .pdf https://yadi.sk/i/C5OulozpfrdRc ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ .pdf https://yadi.sk/i/NoT4CwaefrdRg မြန်မာနိုင်ငံ-ရာဇသတ်ကြီး .pdf https://yadi.sk/i/kAwa6q7-frdRn သက်သေခံဥပဒေ .pdf https://yadi.sk/i/hhfc-aIdfrdRt ရန်ကုန်ရဲအက် .pdf https://yadi.sk/i/TIP1x2lGfrdRx ရဲလက်စွဲ ၁ .pdf https://yadi.sk/i/T1kG3urafrdRz ရဲလက်စွဲ ၂ .pdf https://yadi.sk/i/5aaEecyHfrdS3 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောက်ယှက်မှု သိကောင်းစရာများ .pdf https://yadi.sk/i/TXm8I0fdfrdS9 လူ့ အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း .pdf https://yadi.sk/i/yTUaERt7frdSD လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ.pdf https://yadi.sk/i/Aer1XhdMfrdSK အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဥပဒေ .pdf https://yadi.sk/i/7Do09RyefrdSM ၂၀၁၂ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေ.pdf https://yadi.sk/i/FZdU10SNfrdSR ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ အမှတ်(၉)(၂၀၁၂ မတ်လ ၃၀) .pdf https://yadi.sk/i/DMGTNm60frdSV […]
မနှင်း blog ထဲက သမိုင်းစာအုပ်​ Download link များ
Credit to – On Air စာ​ပေ facebook page (၁) အင်းဝရွှေနန်းရောက် ဗြိတိသျှ သံအဖွဲ့မှတ်တမ်း (၁၈၅၅)(တက္ကသိုလ်နေ၀င်း) http://www.mediafire.com/?z9ypq726494lac2 (၂)အ လောင်းမင်းတရားကြီး၏ကုန်းဘောင်ရွှေပြည် (ဒေါက်တာ တိုးလှ) http://www.mediafire.com/?jx2oxf72ilt5a8k (၃)ကုန်းဘောင် ရှာပုံတော် (ညိုမြ) http://www.mediafire.com/?idhxn8fo547u79d (၄)အောင် ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?ht3gdri35qjcolc (၅)အိုဘယ့်အနော်ရထာ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?8uzaxzzzzdt9dyf (၆)၁၉၄၅ မြန်မာနိုင်​ငံ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးသမိုင်း (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?1y75jvx7jcb9c63 (၇)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၁ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?2y0baijuh4lwwhl (၈)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၂ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?41cyj328ij0mrnz (၉)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၃ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?aagkbtzijt0woxf (၁၀)ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာဦးသန့် ၄ (တက္ကသိုလ်စိန်တင်) http://www.mediafire.com/?5wjjc614w9a48z5 (၁၁)သံလွင်မြစ်ကမ်းတိုက်ပွဲ (တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ်) […]
စှယျစုံကြျောထငျကမျြး မွနျမာ့စှယျစုံကမျြး(၁၉၈၆ ခုနှဈ) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၇) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၄) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၅) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၃) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၀) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၇၉) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၂) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၁) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၈) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၉၀) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၉၁) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၈၉) မွနျမာ့စှယျစုံကမျြးနှဈခြုပျ(၁၉၇၈) http://www.kbrl.gov.mm/catalog/index/36
By danyawadi December 16, 2019 Leaveacomment
(၁) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(၁) (၂) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(၂) (၃) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(ဒုတိယတွဲ) (၄) ရခိုင်သမိုင်းအလင်းပြကျမ်း (၅) ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်း(ဒုတိယတွဲ-၂) (၆) ရက္ခိုင်စကားပြင်ကျောက်စာတစ်ချပ် (၇) ရခိုင်ရာဇ၀င် (၈) နတ်သမီးသိုက်ရခိုင်ရာဇ၀င် (၉) အင်းစောက်ရာဇ၀င် (၁၀) ရခိုင်ရာဇ၀င်ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းနှင့်သုတေသီအတွေးအမြင် (၁၁) ပီပြင်သောရခိုင်ဘုရင်များ၏ရာဇ၀င် (၁၂) ဘူးသီးတောင်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (၁၃) မင်းပြားတစ်ခွင်ကျိန်းတော်ရှင် (၁၄) မြောက်ဦးမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (၁၅) မြောက်ဦးမြို့တော် (၁၆) မင်းပြားမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (၁၇) ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ဖြစ်စဉ်သမိုင်း (၁၈) အ၀ကျွန်းသမိုင်း (၁၉) ခြေတော်ရာကြီး၏သမိုင်း (၂၀) ရခိုင်ရိုးရာစည်တော်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းအကြောင်း (၂၁) ရခိုင်နိဒါန်း (၂၂) မဟာကျန်မုနိငါးဆူ (၂၃) ရခိုင်မြန်မာမင်းနှစ်ပါးတို့၏ရာဇသံ (၂၄) ရခိုင်သမိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် (၂၅) ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော်များ (၂၆) ရခိုင်နှင့်ကုလားတို့၏သမိုင်းထဲမှစစ်ပွဲများ (၂၇) လက်ဝဲသလုံးတော်ဓာတ်သမိုင်းနှင့်စစ်တွေအကြောင်း (၂၈) လိုင်ရိုးတော်ဓာတ်သမိုင်း (၂၉) ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကျဆုံးခြင်း (၃၀) ရခိုင်ရာဇ၀င်ကြီး (၃၁) ရခိုင်မင်းသား (၃၂) ALP သမိုင်း (၃၃) သျှစ်သောင်းပုထိုးတော်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးပေါင်းချုပ် (၃၄) ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိဆင်းထုတော်များလေ့လာချက် (၃၅) သီရိသုတမရာဇာနန်းတက်ပွဲ (၃၆) မြောက်ဦးခေတ်နှောင်းရခိုင်သမိုင်း(အေဒီ1638-1784) (၃၇) သျှစ်သောင်းဘုရားသံထီးတော်ရခိုင်သံကျပ်ကြီး (၃၈) ဆရာကြီးဦးဦးသာထွန်းနှင့်ဆွေးနွေးချက်များ (၃၉) မြောက်ဦးခေတ်အစောပိုင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေ http://arakannew1.blogspot.com/2015/01/blog-post_78.html
By danyawadi December 10, 2019 Leaveacomment
ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ရာဇဝင်၊ သမိုင်း၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စာအုပ် ၁၂၀ (၁) ရခိုင်အက္ခရာ ဆင်းသက်ရာ (အသျှင်စက္ကိန္ဒ) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHOGQ4MDcyYmEtNjBkZi00MWYwLThiNjUtNTgxZjU1MGExOTkw&hl=en (၂) ရခိုင်အက္ခရာ စာပီခရီးလမ်းကြောင်း (အသျှင်စက္ကိန္ဒ) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMzk1OTZhMWItMTI2Zi00MDA5LWJkZTEtM2RhZTc3NTU4MzM2&hl=en (၃) ရခိုင်သင်ပုန်းကြီး ရွတ်ဖတ်နည်း (အသျှင်စက္ကိန္ဒ) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHMTEyODliMjktZjVmZi00NjYzLWE3MmMtZDdlMmJmYTdlYmZl&hl=en (၄) အက္ခရာအကြောင်းဟောပြောချက် (အသျှင်စက္ကိန္ဒ) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx1Bi8oWwznHZjQ5ZjRjNDYtNzBhMy00MGRjLTg5NDctZmU1YmMzZmQyMDBk&hl=en (၅) ဂန္တဝင်ရခိုင်ဝေါဟာရများ https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFMTIwZTJmM2ItZTY4Ni00NzExLWI5MzMtZWE1MjIxYmI0Mjkx&hl=en (၆) ရခိုင်ဘာသာစကားလမ်းညွန် https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFOTk5NTEyNzUtOTlhZC00MjJjLWIyZDMtZjBjYjA3MTJmOTky&hl=en (၇) လောကသာရ အဖျား (ရခိုင်သူမြတ်) https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHNjQzOTkwNDktNzk3ZC00NGUwLWIzZDMtOWZiOTM3ODc1ZTZk&hl=en (၈) လောကသာရဆုံးမစာ (ရခိုင်သူမြတ်) https://docs.google.com/fileview?id=0B1SL3oD0_xcFYWFjN2YzZTktMzNhZC00OTZjLTliNTItNDNlMWVhYWY2YmM3&hl=en (၉) အာန္ဒာစန္ဒြားကျောက်စာ https://docs.google.com/fileview?id=0Bx1Bi8oWwznHOGY2MDQzY2EtODkyOC00MjU2LTk2ZWYtM2JjZDEzZjM4N2I1&hl=en (၁၀) ရခိုင်ကျောက်စာ၊ ပီစာ၊ ပုရပိုက်စာ၊ ခေါင်းလောင်းစာ၊ နန့် အခြားစာပီမူတိ https://docs.google.com/leaf?id=0Bx1Bi8oWwznHNDc5OTcxZDktMTlkNy00OTA1LTkxZjQtMDU3NTMyYmExZTIy&hl=en_US (၁၁) ဂဝိန္ဓကျမ်း (ရခိုင်ဝေသာလီခေတ်တွင်သက္ကတဘာသာမှ […]
Rakhine Historical Book’s link
By danyawadi November 27, 2019 Leaveacomment
http://free4arakan.blogspot.com/2011/06/blog-post_24.html အကျွန်စုဆောင်းထားရေ ရခိုင်သမိုင်းတိ ၁။ ရခိုင် ရာဇ၀င်သစ် အပိုင်း ၁ (ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်) ၂။ ရခိုင် ရာဇ၀င်သစ် အပိုင်း ၂ (ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်) ၃။ ရခိုင် ရာဇ၀င်သစ် အပိုင်း ၃ (ရမ်းဗြဲတောင်ကျောင်းဆရာတော်) ၄။ အေဒီ ၆ ရာစုနန့်ယင်းမတိုင်မီ ရခိုင်ပြည်သုံးအက္ခရာ (ဦးစံသာအောင်) ၅။ ရှေးခေတ်ရခိုင်မင်းဆက်များ ၆။ မဟာတော်ဝင် ဘုရင်မျိုးနွယ်များ (သူမြတ်၊ မဟာအောင်မြေ) ၇။ ထေရ၀ါဒ သာသနာ ရခိုင်တွင် ထွန်းကားလာပုံ (ဦးဦးသာထွန်း) ၈။ မဟာမုနိ ၉။ မြောက်ဦးမြို့ ဘုရားသမိုင်း (ဦးဦးသာထွန်း) ၁၀။ အာနန္ဒစန္ဒြားကျောက်စာ ၁၁။ ထူးဆန်းသော ပုရပိုက်ကျမ်းစာ (မောင်ခင်သိန်း၊ သစ်တော) […]
ရခိုင်စာအုပ်များ စုစဉ်းခြင်း ဆဆဆ Sitemap Navigation 0today is Site owners Arakan Indobhasa Page authors Arakan Indobhasa August 6, 2012 Home This Site is my Collecting Ebooks relating Arakan History, Culture, Society, etc. I give Credit to ” Rakhine Thar Gree Library” for Ebooks uploaded on this Site. Č Ċ A marriage in Burmah by Mrs. M. […]
By danyawadi November 14, 2019 Leaveacomment
မြန်မာ မင်းဆက်များ ပုဂံမင်းဆက် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပထမဆုံးအဖြစ် ဗမာလူမျိုးတို့ အုပ်ချုပ်သည့် ပုဂံခေတ်တွင် မင်းဆက်ပေါင်း ၅၈-ဆက်ရှိခဲ့သည် ဟုဆိုပါသည်။ ခရစ်နှစ် ၁၀ရ -ခု (AD 107 ) ၊ မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၂၉ -ခု တွင် နန်းတက်သော မဟာသမုဒ္ဒရာဇ် မင်း မှစ၍ ခရစ်နှစ် ၁၃၆၈ -ခု (AD 1368 )၊ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၇၃၀ ပြည့်နှစ်တွင် နန်းကျခဲ့သော စောမွန်နစ် မင်းအထိ ။ ၁၂၆၁ -နှစ်ကြာအောင် ရှည်သော အပိုင်း ကို ပုဂံခေတ် ဟု သတ်မှတ်ပါသည် ။ မင်းဆက်ပေါင်း ၅၅ ဆက် ရှိသည် ဟုဆိုသော်လည်း ဘိသိပ်မခံသောမင်း […]